प्रदेश नं. ६ को नाम ‘कर्णाली’ राख्ने प्रस्ताव संसदद्वारा पारित – Sajha Bisaunee
प्रदेश नं. ६ को नाम ‘कर्णाली’ राख्ने प्रस्ताव संसदद्वारा पारित
। १२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:३४ मा प्रकाशित
सुर्खेत, १२ फागुन । प्रदेश नंं. ६ को नामाकरण गरिएको छ । आज बसेको चौथो संसद वैठकले यो प्रदेशको नामाकरण गरेको हो । नेकपा एमलेका संसदस्य दलका नेता यामलाल कंडेलले संसदमा प्रदेशको नाम कर्णाली राखियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीले पनि उक्त प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै प्रदेशको नाम कर्णाली राख्नुको विकल्प नभएको बताए । त्यसैगरी राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद शोसिला शाहीले पनि प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धि कंडेलको प्रस्तावमा समर्थन जनाएकी थिईन ।
नामाकरण सम्बन्धिको प्रस्ताव मतविभाजनमार्फत पारित गरिएको हो ।
वैठक जारी छ । प्रदेशको नाम पारित भइसकेपछि वैठकमा राजधानीसम्बन्धि प्रस्ताव पेश हुने र त्यसमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूचि छ ।